Shaashadda Galaxy S7 ayaa ugu fiican maanta Wararka IPhone
Shaashadda Galaxy S7 ayaa ugu fiican maanta
Sida laga soo xigtay khubarada DisplayMate Technologies, shaashadda cusub ee cusub Samsung Galaxy S7 waa shaashadda ugufiican ee aad illaa hadda ku aragtay taleefanka casriga ah. Sida ku xusan wararka xanta ah ee la xiriira shaashadaha iPhone-ka ee mustaqbalka, Apple wuxuu isticmaali doonaa shaashadda noocan ah labada ama saddexda sano ee soo socota, iyadoo ay ugu wacan tahay heshiiska ay la gashay LG iyo Samsung ee ku saabsan soo saarista ballaaran ee shaashadda OLED.
Shaashadda Samsung Galaxy S7 cusub ayaa si weyn uga fiican tii ka horraysay, oo ay ku jiraan koror 29% dhalaal ah marka loo eego S6. Intaa waxaa dheer, soo bandhigida shaashadda ayaa si weyn loogu hagaajiyay deegaanno dhalaalaya iyo isticmaalka batteriga oo aad uga waxtar badan.
Haddii aan isbarbar dhigno shaashadda cusub ee Galaxy S7 iyo Xusuusta 5, waan hubinnaa muuqaalka cusub ee S7 wuxuu bixiyaa dhalaal badan, saxnaan midab ah, isbarbardhig iyo muuqaal toos ah. Bandhigan cusubi wuxuu adeegsanayaa sub-pixels sare u qaadaya muuqaalka muuqaalka iyadoo loola dhaqmayo midabada casaanka, cagaarka iyo buluuga ah shakhsiyaadka shakhsiga ah ee sawirka. Sida laga soo xigtay Display Mate tiknoolajiyaddan ayaa siin karta dareenka ah inay 3 jeer ka xalliyaan wax ka badan waxa ay dhab ahaan leeyihiin
Horumarka weyn ee Samsung ay ka heshay shaashadda OLED, waxay leeyihiin faa iidooyin fara badan oo ka weyn kan looxyada dhaqameed ee LCD. Bilawga, way ka khafiifsan yihiin oo ka fudud yihiin, taas oo kuu oggolaanaysa inaad abuurto aalado leh shaashad yar oo shaashad ah. Intaas waxaa sii dheer, waqtiyada jawaabta ayaa dhaqso badan, hagaajiya xagalka daawashada, cunida tamar yar waxayna sidoo kale bixisaa ikhtiyaar Had iyo jeer Daar, taas oo noo tusaysa macluumaadka shaashadda si isdaba-joog ah iyada oo aan si xad dhaaf ah u saameynayn isticmaalka batteriga.
Tikniyoolajiyadda OLED waxay noqoneysaa tan ugu weyn ee ka soo horjeedda shaashadaha LCD. DisplayMate ayaa sheeganeysa in bandhigyada LCD way ka waxtar badan yihiin haddii aan ka hadalno isticmaalka korontada marka badiyaa midabbada cad la soo bandhigo. Si kastaba ha noqotee, markaan bilowno isku dhafka midabada, tiknoolajiyada OLED waxay ka taagan tahay meel aad uga sareysa shaashadaha LCD iyadoo si weyn loo hagaajinayo isticmaalka korontada.
Apple waxay isticmaashay shaashado kala duwan oo LCD ah aaladeeda, tan iyo tusaalihii ugu horeeyay ee la bilaabay 2007, laakiin sidaan dhowr jeer kugula socodsiinay iPhone News, Apple wuxuu damacsan yahay inuu qaato teknolojiyadda OLED ee iPhones cusub oo suuqa soo gashay laga bilaabo 2018.. Laba sano gudahood, tikniyoolajiyadda laxiriira shaashadan ayaa hubaal sii horumari doonta xitaa inbadan, sidaa darteed Apple ayaa awoodi doonta inay ka faa'iideystaan. In kasta oo isticmaaleyaashu ay sii wadi doonaan inay la silcayaan tayada shaashadaha LCD ee hadda jira, halkaasoo kuwa cadaanku weligood cad yihiin, madowna weligood madow yihiin.
Xilligan qalabka kaliya ee adeegsada teknolojiyadda OLED waa Apple Watch. In Apple Watch waxaan arki karnaa sida madow uu gebi ahaanba madow yahay oo ma jecla iPhone-ka, halkaas oo madow yahay nooca cawl aad u madow laakiin weligiis madow noqon maayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Shaashadda Galaxy S7 ayaa ugu fiican maanta
tirinta tufaaxa efficiency waxtarka batteriga oo lagu daray xallinta wanaagsan iyo dhalaalka tartanka